किसानका लागि पुस्तकालय - Pradesh Today
Homeमुख्य खबरकिसानका लागि पुस्तकालय
घोराही, २५ जेठ । दाङमा किसानहरूका लागि पुस्तकालय निर्माण गर्न लागिएको छ । रोटरी क्लव अफ दाङले नागरिकहरूलाई कृषितर्फ आकर्षित गर्नका लागि कृषि ज्ञानकेन्द्रको पुस्तकालय भवन निर्माण गर्न लागेको छ । क्लवले घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं. ३ बन्जाडीमा उक्त भवन निर्माण गर्न लागेको हो ।
विशेषगरी कृषिमा महिलाहरूलाई आकर्षित र आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले पुस्तकालय निर्माण गर्न लागेको हो । पुस्तकालयमार्फत कृषि क्षेत्रका लागि आवश्यक पर्ने जानकारी लिन सकिनेछ ।
खेती किसानी गर्दा उत्पन्न हुने समस्याहरूको पहिचान गरी स्वयम् समाधान गर्नका लागि सहयोगसमेत गर्नेछ । करिब तीन साताभित्र उक्त भवनको उद्घाटन गरिने क्लवका अध्यक्ष तीर्थ पौडेलले जानकारी दिए ।
कृषिलाई पेशा व्यवसायीकरण गर्दै गाउँमै रोजगार सिर्जना गर्ने र कृषि क्षेत्रका लागि आवश्यक पर्ने परामर्श तथा जानकारीका प्रदान गर्ने केन्द्रका रूपमा पुस्तकालयलाई स्थापना गरिने उनले बताए ।
किसानहरूको खेतीलाई व्यवसायीक बनाउन आवश्यक पर्ने ज्ञान र सिपका कुराहरू भएका पुस्तकहरू उक्त कृषि ज्ञानकेन्द्र पुस्तकालयमा राखिने क्लवले जनाएको छ । करिब ७ लाख रूपैयाँ लागतमा उक्त भवन निर्माण गर्न लागिएको हो ।
यसैबीच रोटरी क्लव अफ दाङले घोराही उपमहानगरपालिकाका किसानहरूलाई तरकारीको बीउ वितरण गरेको छ । क्लवले उपमहानगरको वडा नं. २, ३, ४ र १७ का १ सय १० जना किसानहरूलाई विभिन्न जातका तरकारीको बीउ वितरण गरेको छ ।
क्लवले टमाटर, बोडी, सिमी, काउली, गोभीलगायतका उन्नत जातका तरकारीका बीउहरू किसानलाई वितरण गरिएको अध्यक्ष पौडेलले जानकारी दिए ।